July 2018 - Page 64 of 169 - Taja Report
पूजा गर्दा गर्नै नहुने १० कार्यहरु हेर्नुहोस् ! झुकिएर पनि गर्नु भएमा आइलाग्नेछ दुखको बज्रपात
July 19, 2018 Comments Off on पूजा गर्दा गर्नै नहुने १० कार्यहरु हेर्नुहोस् ! झुकिएर पनि गर्नु भएमा आइलाग्नेछ दुखको बज्रपात
पूजा गर्दा गर्नै नहुने १० कार्यहरु हेर्नुहोस् ! झुकिएर पनि गर्नु भएमा आइलाग्नेछ दुखको बज्रपात सुखी र समृद्ध जीवनको लागि देवी-देवताहरुको पूजा गर्ने परम्परा लामो समय देखी चलिआएको छ। आज पनि धेरै मानिसहरु यो परम्परामा [ पुरा पढ्नुहोस ]
ईमान्दारीताको उदाहरण – फेवातालमा भेटिएको पैसा काठमाडौं आएरै फिर्ता गरीयो पूरा पढ्नु होस ।
July 19, 2018 Comments Off on ईमान्दारीताको उदाहरण – फेवातालमा भेटिएको पैसा काठमाडौं आएरै फिर्ता गरीयो पूरा पढ्नु होस ।
काठमाडौं । भनाई छ पैसा देखेपछि महादेवको पनि तिन नेत्र खुल्छ भने मानिस पनि पैसाको पछि त्यत्तीकै लागी परिरहेको भेटिन्छ । पैसाकै लागि चोरी डकैति मार पिट जस्ता कैयन घटनाहरु घटिरहेका हुन्छन् । तर पोखराका महेन्द्रमान [ पुरा पढ्नुहोस ]
लाफिङ बुद्धलाई घरको यस स्थानमा राख्नुहोस, हुनेछ धन वृद्धि! पूरा पढ्नु होस ।।
July 19, 2018 Comments Off on लाफिङ बुद्धलाई घरको यस स्थानमा राख्नुहोस, हुनेछ धन वृद्धि! पूरा पढ्नु होस ।।
लाफिङ बुद्धलाई घरको यस स्थानमा राख्नुहोस, हुनेछ धन वृद्धि! पूरा पढ्नु होस ।। हिन्दू धर्ममा कुबेरलाई धन वृद्धि गर्ने भगवान मानिएको छ भने चीनमा लाफिङ बुद्धलाई शुभ र धन वृद्धि गर्ने देवता मानिएको छ । [ पुरा पढ्नुहोस ]
नर्मल डेलिभरी, चाहनेले ध्यान दिनुपर्ने पाँच कुराहरू:- पूरा पढ्नु होस
July 19, 2018 Comments Off on नर्मल डेलिभरी, चाहनेले ध्यान दिनुपर्ने पाँच कुराहरू:- पूरा पढ्नु होस
एजेन्सी । गर्भवती हुनु एक महिला आमा बन्नु हो । यो प्रक्रिया जति रोमाञ्चकारी हुन्छ कहिलेकाँहि त्यो भन्दा धेरै जटिल पनि बन्छ । नौ महिनाको गर्भवस्थाको समय हरेक महिलाको लागि ज्यादै कष्टदायी हुन्छ तर यसपछि प्राप्त [ पुरा पढ्नुहोस ]
रातभरी ३२ किमि हिँडेर पहिलो दिन अफिस पुगेः मालिकले उपहारमा दिए नयाँ कार :- पूरा पढ्नु होस ।।
July 19, 2018 Comments Off on रातभरी ३२ किमि हिँडेर पहिलो दिन अफिस पुगेः मालिकले उपहारमा दिए नयाँ कार :- पूरा पढ्नु होस ।।
अमेरिकाको एक कम्पनीका मालिकले ३२ किलोमिटर पैदल हिँडेर अफिस पुग्ने आफ्ना एक कर्मचारीलाई नयाँ कार उपहारस्वरुप प्रदान गरेका छन् । वाल्टर कारको आफ्नो कार बिग्रिएका कारण उनी रातभरी हिँडेर अफिसमा पहिलो दिन उपस्थित भएका थिए [ पुरा पढ्नुहोस ]
छोरी मान्छेले दिनहुँ हस्तमैथुन गर्दा के–कस्तो असर पर्छ ?थाहा पाई राखौ :- जानकरिको लागि ओउरा पढ्नु होस ।।
July 19, 2018 Comments Off on छोरी मान्छेले दिनहुँ हस्तमैथुन गर्दा के–कस्तो असर पर्छ ?थाहा पाई राखौ :- जानकरिको लागि ओउरा पढ्नु होस ।।
हाम्रो समाजका धेरैजसो मानिसले महिलाहरू हस्तमैथुन गर्दैनन् भन्ने मान्छन्, तर वास्तविकता त्यस्तो होइन । महिलाहरूले पनि हस्तमैथुन गर्छन् । एक अध्ययनअनुसार ८२ प्रतिशत महिलाले हस्तमैथुन गरेको अनुभव भएको बताएका छन् ।योनिलाई नै महिलाको प्रमुख यौनअङ्ग [ पुरा पढ्नुहोस ]
बिहेको त्यो रात ! जब उनी सुक्क सुक्क गरेर रुन थालिन् – अवस्य पढ्नुस यो वास्तविक कथा पूरा पढ्नु होस ।।
July 19, 2018 Comments Off on बिहेको त्यो रात ! जब उनी सुक्क सुक्क गरेर रुन थालिन् – अवस्य पढ्नुस यो वास्तविक कथा पूरा पढ्नु होस ।।
बिहेको त्यो रात ! जब उनी सुक्क सुक्क गरेर रुन थालिन् – अवस्य पढ्नुस यो वास्तविक कथा पूरा पढ्नु होस ।। बिहेको दिन डोलि अनमाई कार भित्र दुलई राखियो । म पनि उनी सँगै गाडि [ पुरा पढ्नुहोस ]
आखिर किन ? आफ्नै बुवाले १६ वर्षिया समिक्षालाई ज्युँदै जलाएर मारे ? रहस्य भित्रको रहस्य एस्तो छ [भिडियो हेर्नुहोस ]
July 19, 2018 Comments Off on आखिर किन ? आफ्नै बुवाले १६ वर्षिया समिक्षालाई ज्युँदै जलाएर मारे ? रहस्य भित्रको रहस्य एस्तो छ [भिडियो हेर्नुहोस ]
उनि भर्खर १५ पुगेर १६ मा पाईला टेकेकी किशोरी थिईन् । कक्षा १० पढ्दै गरेकी उनकी आमा श्रीमानले अर्को विवाह गरेपछि सम्वन्ध विच्छेद गरेर हिँडेकी थिईन् । वावुले अर्को विवाह गरेकी श्रीमती पनि अहिले विदेशमा [ पुरा पढ्नुहोस ]
जुम्लामा गोली लागेका प्रहरीको मृत्यु पुरा पढ्नु होस ।।
July 19, 2018 Comments Off on जुम्लामा गोली लागेका प्रहरीको मृत्यु पुरा पढ्नु होस ।।
जुम्ला- अनसनरत डा गोविन्द केसीलाई काठमाडौं ल्याउने क्रममा जुम्ला अस्पतालमा भएको झडपका क्रममा गोली लागेका प्रहरीको मृत्यु भएको छ। बिहीबार बिहान डा केसीलाई लिन नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर गएपछि अस्पतालमा स्थानीय र विद्यार्थीले अवरोध गरेका थिए। सोही [ पुरा पढ्नुहोस ]
डा. केसीको समर्थनमा अस्पतालमै बिरामी पक्ष र डाक्टर बीच हानाहान !(भिडियो सहित)
July 19, 2018 Comments Off on डा. केसीको समर्थनमा अस्पतालमै बिरामी पक्ष र डाक्टर बीच हानाहान !(भिडियो सहित)
काठमाडौं । त्रिभूवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा त्रिपक्षीय भिडन्तको अवस्था देखिएको छ । उपचारका लागि आएका सर्वसाधारण, आन्दोलनरत चिकित्सक र अस्पताल प्रशासनबीच भिडन्तको अवस्था देखिएको हो । यहाँ सर्वसाधारणले उपचार पाउनुपर्ने माग गरेका छन् भने [ पुरा पढ्नुहोस ]
« 1 … 63 64 65 … 169 »